Bipasha Basu 15 Jirkeda Iyo 39 Jirkeda Farqi Sidaa Uma Dhaxeyo Qurux Ahaan Waa Atirisho Is Heysa (+Sawiro) – Filimside.net
Bipasha Basu 15 Jirkeda Iyo 39 Jirkeda Farqi Sidaa Uma Dhaxeyo Qurux Ahaan Waa Atirisho Is Heysa (+Sawiro)
January 3, 2019 Ali Aadan
Taariikhda: January 3, 2019
Bipasha Basu waa mid kamdi ah atirishooyinka ugu soo jiidashada badan ee qarnigaan cusub Bollywoodka soo mareen waa atirisho karti badan balse nasiibka saacidi waayey maqaam sarena ka gaari weysay fanka hindiya.
Haatan waa 39-sano jir, welina isma bedelin Bipasha Basu tan iyo markii ay jirtay 15-sano, waana arrin layaab leh runtii, atariishadan ayaana arrintaas ka hadashay.
Sheekadan waxa ay soo ifbaxday, markii Bipasha Basu ay keentay filimka Alone (2015) oo ay ku soo bandhigtay bandhig layaab leh oo dareen xambaarsan.
Bipasha Basu waxa ay inta badan keentaa filimada qaboow ama dareenka abuura, waana kuwa jacaylka ah ee dagaalka maaha inkastoo aflaam dhowr ah oo Action ah ay wax ka jishay.
Atariishadan waxa ay soo bandhigtay sawir yaraanteedii ah, markaasoo ay 15-sano jir ahayd, waana midka sare idiin kaga muuqda waxayna ku shaacisay boggeeda xiriirka bulshada ee Instagram-ka, iyadoo ku soo qortay: “Waxaan shaqada bilaabay anigoo aad u yar, 15-sano jir baan ahaa markii aan model ka ahaa Kolkata.”
Bipasha ayaa filimkeedii ugu dambeeyey waxa uu ahaa filimkii ‘Alone’ oo ay wacdaro ka dhigtay dareen badanna ku soo bandhigtay waxaana filimkaas ay la wadday jilaaga Karan Singh Grover kaaso ah seygeeda dhabta ah maanta.
Waxaa Aqrisay 607